Uma unemibuzo noma iziphakamiso mayelana ne-khona ingane yakho, sicela unganqikazi ukuthintana Miss S Irvin, Ababekhona Officer ku 01702468047 noma ngokuthumela i-imeyili attendance@pgps.porticoacademytrust.co.uk
Uma ingane yakho ingekho nganoma yisiphi isizathu, kufanele usazise ngokushayela isikole ucingo 01702468047 (inketho 1) ekuseni ungekho. Sicela unikeze igama lengane yakho, isigaba kanye nesizathu sokungabikho. Sicela futhi usigcine sivuselelwa uma ukungabikho kuqhubeka kuze kube ngosuku olulandelayo.
Sikhuthaza konke ukuqokwa ukuba kwenziwe ngaphandle kosuku lwesikole. Kodwa-ke, uma ingane yakho ingekho esikoleni ngenxa ye-aphoyintimenti, sicela unikeze ihhovisi lesikole incwadi noma ikhadi lokuqokwa ukuze ukungabikho kurekhodwe ngokufanele.
Ukubambezeleka ekuqaleni kosuku
Lapho ingane ifika sekwephuzile ekuqaleni kosuku lwesikole, kuphazamisa kakhulu ukufunda kwayo nokufunda kwalabo efunda nabo. Uyacelwa ukuthi uqinisekise ukuthi ingane yakho ifika ngokushesha ngesikhathi sabo seminyaka ebelwe ngezansi.
Ukungabikho Kwabafundi Esicelo Sesikole
Ingane yakho inesibopho esisemthethweni sokuba sesikoleni izinsuku eziyi-195 ngonyaka. Njengoba kunezinsuku ezingama-365 onyakeni wekhalenda, lokhu kushiya izinsuku eziyi-170 zamaholide, uhambo nokuvakashelwa. Siyabona ukuthi, kwesinye isikhathi, kuvela izimo ezehlukile. Uma lokhu kunjalo, leli fomu lesicelo lisetshenziselwa ukucela ingane yakho ukuba ingabikho egunyaziwe. Kuyisinqumo sesigungu sethu esilawulayo ukwenqaba izicelo zamaholide ngaphandle kokuthi kuvume lezo zimo ezehlukile
Ukucela ukungabikho kwabafundi esikoleni sicela uchofoze lapha